Qabaa’ilka kusugan gobolka Naynawaa oo sheegay iney difacaan doonaan dhulkooda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Qabaa’ilka kusugan gobolka Naynawaa oo sheegay iney difacaan doonaan dhulkooda.
On Apr 11, 2016 120 0
Qabaa’ilka Muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Moosil oo ay maamusho dowladda Islaamiga ah ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney difaacdaan magaaladooda iyo guud ahaan gobolka, oo ay isku dayayaan Rawaafida iyo Reer galbeedka iney weerar kusoo qaadaan.
Odoyaal katirsan waxgaradka Naynawaa, islamarkaana ah hogaanka Qabaa’ilka ayaa sheegay ineysan cabsi gelineynin taxaalufka iyo is uruursiga Gaalada iyo Rawaafida, iyagoo garwaaxsan qoriyaasha AK47 ayay ku hanjabeen iney difaacan doonaan dhulka Islaamka.
Mid kamid ah Odoyaashaas oo lagu magacabo Faysal Xamaadi Suldaan islamarkaana la dhashay gudoomiyaah Rawaafida u qaabilsan gobolka Naynawaa ayaa bari ka noqday walaalkiisa, isagoona ku tilmaamay Nin Murtad ah loona baahan yahay in lagu dilo goobtii lagu arko.
Mujaahidiinta iyo guud ahaan Qabaa’ilka Sunniyiinta dalka Ciraaq ayaa hal saf ku ah difaacida Xurumaadka iyo dhulka Muslimiinta, waxaana haatan muuqata in si wanaagsan ay isku dhex galeen Mujaahidiinta iyo Qabaa’ilka.